Dheelmashadii dheerayd Qalin kii Ramla Gobdoon - Hablaha Media Network
Dheelmashadii dheerayd Qalin kii Ramla Gobdoon
HMN:- Markii aan soo kacayba horay ayaan ka dhaqaaqay. Waxaan galay socod aad u dheer oo aan marna ku daalin. Waddo laammi ah oo leh dalcad aad u sarraysa ayaan lugta saaray. Laammigu waxa uu liishe la moodo in mar dhawayd la dhisay. Waan socday oo socday.
Muuqaal kale oo aan ahayn waddada aan ku socdo ii ma muuqan. Dalcaddu marba marka ka dambaysa waa ay sii kor maraysay. Ma daalin. Maba aanan dareemin. Wax aan socodkaa ku doonayay iyo wax aan ugu dan lahaa midna ma ogayn. Waan is ka dhaqaaqay uun.
Maro jilicsan u na tolan sida diraca ayaan xirnaa. Ballac ahaan waa ay ila ekayd, dhirika gacmaheeduna waxa ay ku sinnaayeen xusulka ka kor. Waxaan hugsanaa maro hal midab ah, aadna uga yar cabbirka garbasaarka caadiga ah. Midabkii ay ahayd ma xasuusto.
Hal faraq ayaa gadaal iigu ridnaa, midka kalana laabta ayuu iigu daysanaa. Maradii diraca shabbahaysay ee aan gashanaa ayaan gacanta bidix ku soo xaytay ilaa ay feedmatay qaybta hoose ee lugtayda. Faraha oo ay maradu ku hoos jirto ayaan bogga ku qabsaday, gacantayda midigna kor saaray tan kale.
In aan caga caddaa iyo in aan xirnaa kabo sidii dacaska dhulka ku dheggan ma sixi karo. Waddadii ayaan ku sii socday.
Gudahayga waa uu diirranaa. Waxa aan dareemayay xasillooni badan. Waan qanacsanaa. Kaligay iyo waddada oo qura ayaa muuqday, haddana waan dhoolla caddeenayay mararka qaar. Hortayda ayaan si toos ah u fiirinayay. Marna gees ma jalleecin.
Daruurta cirka waxa ay u ekayd sidii oo uu roob xooggan soo di´i rabo. In badan oo qiyaastii saacado gaaraya ayaan waddadaa ku lugaynayay. Marna dhinac u ma leexan. Waan socday, socday oo socday. Cabbaar ka dib ayay waddo kale iiga soo baxday dhinaca bidix. Waan leexday. Kolkanse waddadu waa bacaad. Bacaad qalallan oo aad u badan ayuu ahaa. Lugahayga ayaa carrada dhex gelayay.
Iftiin sida maalinta oo kale ah ayaa jiray. Cadceeddu waa ay badnayd, haddana kuleel aad ah ma dareemin. Waxaa i soo galaysay leer wadata dabayl qafiif ah.
Sida ay dharkaygu u babanayaan ayaan dareemayay. Faraqii gadaal u ridnaa ee go´ayga yar ayay dabayshu ku soo tuurtay garabkayga. Wali sidii ayaan bogga ugu haystay gacmaha. Waan socday. Wax badan ayaan haddana socday. Bacaadkii aan ku socday ayaa is baddalay. Qaboow iyo qooyaan aan badnayn ayaan lugaha ka dareemay. Carro leh dhiiqo aan aad kuu soo raacayn ayaan ku dul lugaynay. Wali waan sii socday.
Dhinacayga midig ayaan eegay. Bad kacsan oo tufaysa hir xoog badan ayaan arkay. Hortayda ayaan fiiriyay. Waxaa ii muuqatay xeeb aad u dheer. Baddii ayaan mar kale jalleecay. Bartaas ayaan istaagay. Cagahayga waxaa soo gaarayay biyo, ciidna way ku dul haraysay.
Shishe markaan badda eego, waxaa la moodaa in iyada iyo cirku ay is ku imaanayaan. Halkaas ayaan aragtida ku nasiyay. In badan ma libiqsanayn. Hirka xooggan ee kor u boodaya oo kaliya ayaa iga soo dhex galayay halkii aan daawanayay. In badan ayaan meeshaa taagnaa. Eegmada ayaan la baxay. Wax aan ku fakaray oo maskaxda ku taagnaa ma sheegi karo.
Gadaashayda ayaan cod ka maqlay. Cod rag oo aan garanaynin ayaa uu ahaa. “BERBERA ayaad joogtaa” ayuu qofkaasi igu yiri! Sidii qof faker la baxay ee la ga soo dhex galay oo kale ayaan daymadii dheerayd ka soo noqday. Biyaha hortayda u dhow ayaan indha ku dhuftay.
Dhabarka ayaan badda xejiyay, halkii codka iiga soo yeerayna u jeedsaday si aan u arko qofkii i la hadlay. Hurdada ayaan ka soo toosay.
Waan fadhiistay. In aan sariirtayda joogo oo ay aroor tahay ayaan xaqiiqsaday. Habeenkii oo dhan waan dheelmanay. Berbera oo maqal mooyee aanan waligay arag, si waynna aan uga fakerin marar badan ayaa la ii dheelmiyay.
Qof rag ah ayaa ii sheegay in goobtu ay Berbera ahayd! Taloow waa ku ma? Alloow sidii roon ka dhig. Indhaha ayaan marmartay ka dibna waxa aan u dhaqaaqay howl maalmeedkayga.